Mahad Karatay ayaa ku tilmaamay howlgalkii Xabsiga Boosaaso kiisii ugu weynaa ee laga fuliyo… – Hagaag.com
Mahad Karatay ayaa ku tilmaamay howlgalkii Xabsiga Boosaaso kiisii ugu weynaa ee laga fuliyo…
Mahad Warsame Qaley (Mahad Karataay) oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ururka Al Shabaab ayaa ka hadlay weerarkii maleeshiyada Al Shabaab ku galeen Xabsiga Magaalada Boosaaso, halkaasoo sida uu sheegay ay ka soo sii daayeen afar boqol oo maxaabiis ah.
Hadal uu jeediyay Mahad Warsame Qaley oo xalay lagu baahiyay baraha Internet-yada ee afka Shabaabka ku hadla ayuu ku sheegay in yoolka ay hiigsanayaan uu qayb ka yahay in la soo furto buu yiri maxaabiista Muslimiinta ee gaalada xabsiyada ku hayso.
“Waa xabsi dhismihiisa iyo maalgelintiisu ay lahaayeen saliibiyiinta, boqolaal dad ah oo Muslimiin ahna ay ku xirnaayeen, jirdil, ciqaab iyo tacdi joogtana ay kala kulmayeen sirdoonada saliibiyiinta ee xabsiga dhistay iyo Maamulka Puntland.” Ayuu yiri Mahad Warsame Qaley.
Waxa kaloo uu sheegay in weerarkaasi uu u dhacay sidii loogu talagalay, isagoona yiri “Weerarka ayaa bilowday wax yar ka hor, saqdii dhexe xilliga Magaalada Boosaaso, wuxuuna u dhacay sidii loo qorsheeyay.”
Mahad Karataay ayaa yiri “Alle fadligiisa waxaa mujaahidiinta u suurtagashay inay xabsiga gacanta ku dhigaan, ka dib dagaal adag oo ay la galeen cadowgii ilaalada ka ahaa, ku dhawaad toban ka midana ay ka dilaan, tiro intaa ka badana ay ka dhaawaceen. Waxay sidoo kale mujaahidiintu ku gubeen weerarkaasi saddex ka mid ah gaadiidka dagaalka ee cadowgu lahaa.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxay mujaahidiintu soo furteen dhammaan maxaabiistii Muslimiinta ee ku xirnaa xabsigaasi. Maxaabiista lagu soo furtay hawlgalkaa barakeysan ee mujaahidiintu ka fuliyeen xabsiga Magaalada Boosaaso ayaa gaarayay afar boqol oo ruux.”
Waxa uu intaa ku daray “Waxaana ka mid ahaa gabdho Muslimaat ahaa oo si xaqdarro ah ay cadowga halkaasi ugu haysteen. Waxay mujaahidiintu ku guuleysteen inay maxaabiista si nabad ah kaga soo saaraan xabsiga. Waxay ka soo foggeeyeen goobihii uu cadowga ku sugnaa, waxayna keeneen goobo ay mujaahidiintu maamulaan, ka dibna qof weliba waxay u jiheeyeen halkii uu doonayay inuu aado.”
Mahad Karataay ayaa hawlgalkan ku tilmaamay kiisii ugu weynaa ee laga fuliyo Geeska Afrika oo idil, sida uu yiri.